Obere ulo ime obodo - ihe ohuru na otutu ihe omuma nke obodo
Obere ulo bụ ìgwè nke obere ụlọ na-emetụta oke banyere oghere ndị ọrụ ya.
O bu site na iji ihe ndi ahutara ngwa ngwa eji udiri emezi ka mpaghara mepere emepe mara, agwa, ma karisia, na aru oru.
Ngwongwo okporo ụzọ na-emetụta oghere dị gburugburu, yana ahịhịa na ụlọ, na-enye aka na ya iji ohere gbasara ohere.
Obere ụlọ n’obodo na-ewu ụlọ na-aghọ ihe dị iche n’obodo.
Na-esote ihe akacha mara, ihe ncheta ma ọ bụ ebe, ejiri nlezianya hazie obere ije ụlọ ọ nwere ike bụrụ ihe ndị njem nleta ga-echeta.
Ọ ga-ejikọ ya na obodo enyere. Ọ ga-eme ka ha dị iche na mpaghara mba na mba.
Ọbụnadị taa, na-eduga, obodo ukwu ọgbara ọhụrụ na-asọrịta mpi, a na-akpọkwa ya ihe mara mma ọ bụghị naanị maka ndị njem, kamakwa maka ndị bi na ya nke ọdịdị doro anya dị oke mkpa.
Ezubere nke ọma oche, n'igwe, tebụl, ite ifuru na ihe ebe egwuregwu enwere ike ịtụte agbata obi n'ụzọ gara nke ọma, na-eku ume ọhụrụ n'ime ya, mee ka ọ pụọ iche ma na-ekwupụta.
N’ihi nke a, ndị bi n’obodo na ndị njem na-aga eleta ya.
Obere ime obodo ije - ọrụ
Ihe ndi eji emeputa nke oma dika ihe eji eme ulo, n'uzo anaghi ahu anya, nyere aka idozi ma dozie ọrụ nke oghere ahụ.
Ihe atụ mara mma nwere ike postsigbochi okirikiri ma ọ bụ okporo ụzọ ogwe osisi ifuru na okooko osisi.
N'otu oge ahụ, ha bụ ihe ịchọ mma ma na - egbochi ụgbọ ala ebe ha na - adọba ụgbọala n'ime obodo amachibidoro iwu ma ọ bụ gbochie ohere ịnweta ya.
Ihe atụ ọzọ nke ụdị a bụ mkpuchi osisi, n'otu oge ahụ na-echebe ụgbụgbọ ha, na -ebibi mmebi, ma mejupụta otu ihe ịchọ mma.
Agbanyeghị, arịa ụlọ dị n'okirikiri karịa ihe niile ogige na ngwá ụlọ n'okporo ámá.
Ndị a gụnyere ụdị dị iche iche oche.
Uzo uzo di iche-iche na-enye ohere iji ihe ndi ozo mezuru na odida obodo.
Ihe ndị kasị ewu ewu bụ oche osisi, ma ọtụtụ mgbe, enwere bench osisi na agba ọ bụla na ụdị ọ bụla, yana oche ndị dị nkọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọkpụkpụ.
Na mgbakwunye na oche, ndị na-eme obodo mepere emepe ga-enwe mmasị iji ebe a na-edebe anyanwụ, nke dabara n'ụzọ zuru oke ọ bụghị naanị na boulevard, n'akụkụ osimiri n'akụkụ mmiri, kamakwa n'ogige, na-eche ihu ìhè anyanwụ.
Formdị Ọdịdị Obodo
Companylọ ọrụ ahụ bụ onye kachasị na-ekesa ngwaahịa ụlọ ọgbara ọhụrụ Formdị Ọdịdị Obodo.
Ọ na-arụ ọrụ na ụlọ ihe owuwu na ndị nrụpụta, iji họrọ ụdị kachasị mma na njiri arụ ọrụ nke obere ihe owuwu.
Ọzọkwa, ọ na-akwado Ala Ojiji ulo, site na imekọ ihe ọnụ, yana inye azịza na ngwaahịa kachasị ọhụrụ.
City Forum Design bụ naanị onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ndị Italia mara mma na Poland - Igwe, Bellitalia na Imewe obodo.
Igwe - ígwè na nkụ
Obere ụlọ dị n’ime obodo bụ isiokwu nke ụlọ ọrụ knowstali maara nke ọma Igwe.
Ọ na-enye ngwaahịa dịgasị iche iche, ọkachasị na usoro ndị a: Obere ulo na obere ije obodo.
Ihe onyinye Metalco gụnyere ndị kachasị mma ngwọta maka ọmarịcha arụmọrụ ọrụ nke ogige, n'okporo ụzọ, ubi na ọdụ.
Metalco na-arụpụta ogige, ogige ogige, oche obodo, oche ọdụ - ma oche osisi na nkụ.
Na mgbakwunye, njikọ nke ụlọ ọrụ a gụnyere nkata okporo ụzọ, ọkwa, bọọdụ ozi, mkpuchi osisi, ite osisi, oche anyịnya, ihe mgbochi ụlọ na ụdị ihe dị iche iche nke okporo ụzọ n'okporo ụzọ: oche dị iche iche, dị mma maka ọkpọ, boulevard, yana maka ogige ma ọ bụ ubi obodo.
Bellitalia - ihe na okwute
Bellitalia bụ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ na-emepụta Europe nchịkọta ihe ndị mepere emepe na obodo, nke a ma ama maka ịdị na-agbanwe ya maka obere ihe owuwu na ihe owuwu ala.
Companylọ ọrụ ahụ arụ ọrụla kemgbe ihe karịrị afọ iri anọ, na-achọpụta ọdịiche dị na ya site na ngwaahịa dị elu, ihe ohuru na imewe ọgbara ọhụrụ.
Ngwongwo okporo ụzọ n'ime oru ngo Companieslọ ọrụ Bellitalia bụ ụlọ profiled, ogige na obodo. Benlọ obibi na-abụkarị otu ihe nkedo, dị irè, na-eke ihe ọkpụkpọ akọwapụtara.
Ọzọkwa, Bellitalia na-enye ọtụtụ ndị na-akụ osisi na ndị na-akụ okwute, ọ bụghị naanị maka otu ifuru ma ọ bụ akwa ifuru, kamakwa maka osisi ịchọ mma.
Na mgbakwunye, Bellitalia ọkachamara, n'etiti ndị ọzọ na okike isi iyi, osisi nkewapụrụ ma ọ bụ na-amachi okporo ụzọ na ebe a na-egwu egwu, ebe a na-egbu ihe mkpofu, ejiri okwute, ma ọ bụ okwute i imomi.
Imewe obodo - imewe nke oge a
Obere ụlọ ihe owuwu, bọọdụ nkwụsị, bọọdụ ozi na agba agba.
Ogige ntụrụndụ na-adọrọ mmasị na imepụta ọgbara ọhụrụ. Ihe eji achọ mma, ite ifuru, ájá ụrọ, ebe obibi bọs, ma ọ bụ ihe mgbochi okporo ụzọ okporo ụzọ bụ ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị obodo mepere emepe ije ngwaahịa Imewe obodo.
Onodu ogo di nma nke ihe ndi obodo a n’eme ka onodu ya site na njikwa nke ihe na oru ha.
N'ụzọ nke a Imewe obodo enwere ike ikwe gị nkwa nkwụsi ike nke ngwaahịa ya yana ikwekọ ụkpụrụ, nchekwa, ihe ọmụmụ, ihe nka na nkasi obi ya.
ihe mgbochi ahịhịaigbachiogwe osisi ifurunkata okporo ụzọọdụ ụgbọ alaBench bench obodoBench benchOgige ntụrụndụIrondọ ocheobere onye na-ekusa ụlọObere ụlọ ime obodoObere uloobere iwu ụlọ iwuobere ihe eji emepụta iheObere ulo n’ime ugboụzọ ụlọosisi ncheebe egwuregwupostsigwe kwụ otu ebebọọdụ ozi